Katedraly Landmark dia may tao Malabo, Guinea Equatoriale
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Katedraly Landmark dia may tao Malabo, Guinea Equatoriale
Mariky ny firenena ary koa mpizaha tany any Malabo, renivohitry Guinea Equatoriale dia nodorana tamin'ny alarobia tamin'ny afo tsy fantatra.
Katedraly St. Elizabeth's dia katedraly katolika romana miorina eo amin'ny araben'i Independencia ao an-tanànan'i Malabo, fonenan'ny Arsidiosezin'i Malabo. Izy io dia heverina ho fiangonana kristiana lehibe indrindra ao amin'ny firenena Afrikana Andrefana. Nomena ny anaran'i St. Elizabeth avy any Hongria izy io.
Ny mpamono afo dia niady mba handrehitra afo tao amin'ny katedraly Malabo ny alarobia lasa teo, satria nandoro ny ampahany tamin'ny tranobe manan-tantara ny afo, noheverina ho fiangonana kristiana manan-danja indrindra ao Guinea Equatoriale.
Olona am-polony no nivory tamim-pahanginana teo akaikin'ny katedraly tamin'ny harivan'ny andro raha nanaparitaka fiaramanidina rano ho an'ny rafitra efa zato taona ny sampana mpamono afo.
Tsy fantatra raha nisy naratra tamin'ny afo, izay nandrehitra afo ny ampahany tamin'ny faran'ny trano.
Ginea ekoatorialy dia firenena afrikanina afovoany izay misy ny tanibe Rio Muni sy nosy volkanika 5 any ivelany.
Capital Malabo, ao amin'ny Nosy Bioko, dia manana maritrano kolonialy Espaniôla ary ivon'ny indostrian'ny solika mandroso eto amin'ny firenena.
Ny morontsirak'i Arena Blanca dia manintona lolo amin'ny vanin-taona maina. Ny ala tropikaly ao amin'ny valan-javaboary Nasionaly Monte Alen dia misy gorila, chimpanzees, ary elefanta.
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina nanolotra fiaraha-miory amin'ny anaran'ny vondrom-piarahamonina Travel sy fizahantany afrikanina. Nanampy izy hoe: Ginea Ginea dia, fantatra amin'ny hoe a azo antoka toerana to fitsidihana, indrindra any Malabo sy Bata.
Guiné Equatoriale dia tany misy primate miaraka amin'ny tarehy voaloko, lolo marevaka ary bibikely misy loko maro loko noho izy ireo amin'ny sehatry ny tantara foronina. Eny, manana laza malaza i Guinea Equatoriale, miaraka amin'ny tantaran'ny fanonganam-panjakana tsy nahomby, fiampangana ny kolikoly, ala-tsena an-tsokosoko ary solika misy menaka, saingy betsaka ny mitondra anao any amin'ny morontsiraka mainty sy fotsy kanto eto amin'ity firenena ity.
Airbus dia mampiseho ny fiainganana mandeha ho azy mifototra amin'ny fahitana
ITB Berlin: fironana ambony miakatra amin'ny dia lavitra ataon'i India